Maxaa iskabeddeli kara? Marka la kordhiyo tirada Gollaha Shacabka Puntland? – Idil News
Maxaa iskabeddeli kara? Marka la kordhiyo tirada Gollaha Shacabka Puntland?
Maxaa iskabeddeli kara? Marka la kordhiyo tirada Gollaha Shacabka Puntland.
(Maanta Hindisaha Mudug, waxaa ka horyimid Nugaal, sidoo kale, Shallay hindisaha Nugaal waxaa ka horyimid Karkaar, Khillaafkii Farolle iyo dhexmaray Cadde Muse (AHN) mid lamid ah ayaa ka dhaxeeya Farolle iyo Cabdiweli Gaas).
Waxaan idiin soo bandhigayaa Siyaasadii lagu jaangooyey tirada Gollaha Shacabka Puntland, iyo sida loogu shaqeysto ama looga Faa’iideysto Codka (Vote).(siyaasada la Isma barro). (Caddaalad daro, khiyaamo) #Conspirecy.
Xildhibaanadu waxay ku kala adag yihiin Cod. Sidaa awgeed, Xubin kasta waxa uu leeyahay Koox, isku lid ah, ama isku dan ah, Waa la qeybiyey (Divide and Rule), waa iskooxeysi joogta ah ama dabiiciya (Natural Grouping). Waa sirta ka dambeysa in Natiijada Guusha ay u dhaxeyso tiro isku dhow ama aysan talladu uga bixin gacanta Siyaasiyiinta Saddex beellood oo Majeerteen ah. Waxaa kamid ah, in aan Codka beellaha qaarkood aan la mideyn Karin, iyagoo illaashanaya Madaxweyne Ku-Xigeenka, Af-hayeenka barlamanka, halka beesha Tanade iyo dashiishe aysan u tartami Karin Saddexda Xil ee ugu sareeya. marka ay beel- kamid ah, saddexdaa ay lumiso doorkeeda kaliya ayey heli karaan fursad ay Ku buuxiyaan Xilka Gudd-barlamanka ama Ku xigeenka.
Marka Waa Saddex beellood oo ku tareysta Kursiga Madaxweynaha, iyo heshiis kale oo u dhaxeeya Saddex beellood oo iyagu kala haysta saddexda Xil ee ugu sareeya. Waxaana Codka bixiya Saddex meellood oo midkiiba ay tahay 21 Cod (Golden ratio 1.6), 11+11+11+11+11+11=66 devil number.
22+22+22= Universal Number.
33+32+1= Gods number, devil and his advocate.(16+16=32+1d).
Marka la kordhiyo tirada Gollaha shacabka waxaa Isbedel Ku imanayaa Kursiga dhulbahante iyo warsangeli, laakiin ma bedeleyso kursi Madaxweynaha ee Maxamud Saleebaan. Waxaa kaliya ee Isbedel Ku keenaya Madaxweynaha tareysiga ah, waa Xisbiyo Siyaasadeed oo laga run sheego tirada dadka laguna qabto dhammaan deegaanada Puntland. (Free and Fair ellec).
Waxaa hortaagan in la kordhiyo tirada GSH, waa dhulbahante iyo Warsangeli, sidoo kale, waxay ugu badisaa MS oo aan dooneyn in looga gudbo Xisbiyo Siyaasadeed.
Ma dhaceyso mana dhicidoonto- taariikhda Puntland in la sameeyo doorasho qof iyo Cod ah, (Fair and Free Elections).
Waxaan rajeynayaa in aan idinla wadaagidoono si ka faah-faahsan qormadan caqabadaha hortaagan doorasho Xor ah, iyo sirta ku jirta tirada 66- iyo sababta looga soo horjeedo isbedel ama aan looga dhigi Karin 65 ama 67 Xildhibaan iwm.
Waxaan idinla wadaagayaa codadka sida iskumid ah u codeeya Doorasho kasta iwm.
Caddaaldu waxay Ku jirtaa Amarka Alle iyo dariiqa rasuulka (SCW)